यसको समसामयिक निदान - रोग को सफल उपचार को लागि आधार। विशेष गरी यो कथन ट्यूमर pathologies गर्दा प्रत्येक दोस्रो गणना कहाँ शाब्दिक जायज छ। एक यस्तो समस्या melanoma छ। हरेक वर्ष यो एक क्यान्सर रोग मात्र साना छ। यो डाक्टर पहिले यो पहिचान गर्न, उच्च एक अनुकूल पूर्वानुमान को संभावना सक्षम हुनेछ। ठूलो विस्तार आजको लेखमा melanoma निदान को प्रमुख तरिका, र यसको उपचार को embodiments वर्णन।
Melanoma - कि छाला ऊतक टुकडे मा विकास ट्यूमर को एक घातक प्रकृति। यो तत्व को प्रजनन गरेर रोगन को चयन लागि जिम्मेवार कक्षहरू - यो melanocytes देखि गठन गरिएको छ। यो पराबैंगनी विकिरण विरुद्ध सुरक्षा गर्न कठिन छन् कि शरीर को ती सबै भन्दा कमजोर क्षेत्रहरु पहिचान। हामी अनुहार, ट्रंक र चरम बारेमा कुरा गर्दै छन्। Melanoma उत्पन्न गर्न सकिन्छ मा-साइट पूर्व-अवस्थित nevus वा पूर्ण स्वस्थ उपकला टुकडे फैलियो।
एक रोग प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को लगभग पूरा कमी छ। तसर्थ, ट्यूमर तेजी विकास र आकार मा बढ्छ। हरेक वर्ष यो बारेमा 1,00,000 मानिसहरू निदान छ। हाम्रो देशमा, त्यहाँ रुग्णता मा वृद्धि झुकाव छ। यस मामला मा, melanoma अक्सर 75 85 वर्ष को उमेर को बीच मान्छे असर गर्छ। यो एकदम जीवनको अवधि कम र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
चिकित्सा तथ्याङ्क अनुसार, अवस्थामा 75% सम्भव विकास एक प्रारम्भिक चरण मा रोग पत्ता लगाउन छ। यो कारणले गर्दा गम्भीर नैदानिक तस्वीर छैन मात्र सम्भव छ। पहिचान को प्रक्रिया मा एक भूमिका melanoma को प्रारम्भिक निदान पर्छ। यो छाला क्यान्सर को अन्य प्रकार देखि भेद गर्न भिजुएलाइज्ड गर्न सकिन्छ। तथापि, उपचार कार्यक्रम को रेखाचित्र अप लागि ट्यूमर धेरै जानकारी बारेमा जान्नु आवश्यक छ। खोजन, भविष्यवाणी यसको प्रमुख embodiments मा मेटास्टेसिस र यति मा। डी यसबाहेक थप विवरण पत्ता लगाउन रोग प्रक्रियाको हदसम्म र चरण निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
चिकित्सा इतिहास - वस्तुतः सबै pathologies को निदान को प्राथमिक चरण हो। उहाँले बिरामीको चिकित्सा इतिहास र जानकारी सभा को एक अध्ययन द्वारा चाहनुभएको। दयालु सर्वेक्षण विशेषज्ञ को परिणाम अनुसार प्रारम्भिक निदान बनाउन र निष्कर्षमा थप परीक्षा नियुक्त दिइएको गर्न सक्नुहुन्छ।
Melanoma ऑन्कोलॉजिस्ट संलग्न। पहिलो स्वागत सधैं आफ्नो डरलाग्दा लक्षण बारेमा रोगी पोल। स्पष्ट गर्न नैदानिक ऑन्कोलॉजिस्ट प्रश्नहरू प्रस्ट्याउने एक नम्बर प्रश्न गर्न सक्छन्: वहाँ सुनिंनु को एक ध्यान हुँदा केही कारक को प्रभाव यसको विकास, आदि preceded ...
निदान melanoma पनि आनुवंशिक predisposition को अध्ययन पनि समावेश छ। डाक्टर अन्य सदस्यहरु मा रोग जस्तै अवस्थामा त्यहाँ रेकर्ड थिए, थाहा महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा सबै भन्दा oncological pathologies एक वंशानुगत अक्षर छन् भन्ने छ।
ट्यूमर को विशेषज्ञ यसको आधारभूत मापदण्डहरु को एक गुणात्मक मूल्यांकन प्रदान चिकित्सीय manifestations एक विस्तृत अध्ययन पाठ्यक्रम:
एक रंग रोगन;
साथै, डाक्टर inguinal, axillary र ग्रीवा लसीका बिन्दुहरुको palpation कार्य गर्दछ। melanoma सर्छ गर्दा यसको रोग घाउ मुख्यतया छिमेकी लसीका नोड्स फैलियो। आफ्नो आकार मा वृद्धि - क्यान्सर को स्पष्ट लक्षण।
ओन्कोलजी मा आशङ्का घातक अवस्था अनिवार्य निदान अध्ययन र अन्य पुर्जा, जहाँ यस्तै तत्व स्थित हुन सक्छ को परीक्षा मानिन्छ। आफ्नो उपस्थिति, धेरै विरामीहरु छैन पनि सजग छन्। एक माध्यमिक neoplasm रूप मा, छाप केही लक्षण प्रकट र बाधा छैन सक्छ। धेरै रोग घाउ - क्यान्सर को यो फारम को एक विशिष्ट विशेषता।
यो melanoma को निदान लागि अर्को गैर-आक्रामक तरिका हो। उहाँले बिल्कुल पीडारहित हो, त्यसैले चिकित्सा manipulations को नडराऊ।
एक माइक्रोमीटर - प्रक्रिया समयमा, डाक्टर यसको आकार विशेष उपकरण निर्धारण, ट्यूमर को मोटाइ बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछ। अन्वेषण छ परिमाण जो 1 भन्दा बढी मिमी छैन पनि सानो गठन, उजागर।
शिरापरक र केशिका रगतको विश्लेषण
तपाईं एक रक्त परीक्षण गरेर शरीर स्थितिको बारेमा धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। सबै क्यान्सर कक्षहरू विशिष्ट प्रोटीन को उत्पादन। यी ट्यूमर मार्कर भनिन्छ। स्वस्थ मानिसहरूलाई तिनीहरूले उपलब्ध छैन।
प्रयोगशाला मा melanoma को मामला मा onkomarkery प्रोटिन एस-100 संवेदनशीलता निर्धारण गर्न। रगतमा यसको उच्च एकाग्रता को सही, तर पनि रोग प्रक्रियाको प्रगति मा प्रारम्भिक निदान राख्नु मात्र संकेत गर्छ। हामी अन्य आन्तरिक अंग प्रणाली प्रभावित छ कि शरीर मा metastases को उपस्थिति बारेमा कुरा गर्दै छन्। यस्तो विश्लेषण डाक्टर प्रयोग चरण उपचार चयन सामरिक चिकित्सा, दक्षता, को आफ्नो डिग्री को विशुद्धता गर्ला।
हाम्रो देशमा ट्यूमर मार्कर को रगत मा एकाग्रता निर्धारण द्वारा melanoma को निदान मात्र शुल्क छ। निरीक्षण लागत व्यावहारिक 100% सही परिणाम जायज कि पर्याप्त उच्च छ।
रेडियोधर्मी फस्फोरस को प्रयोग
melanoma को अंतर निदान प्रतिक्रियाशील फस्फोरस द्वारा प्रदर्शन। यो रोग केन्द्र रेडियोधर्मी फस्फोरस घटक संग लेबल सोडियम फस्फेट disubstituted मा प्रभाव आधारित छ। रोगी डाक्टर बिहान र सधैं खाली पेट मा दबाइ पिउन सुझाव। त्यसपछि, radiometry द्वारा निर्धारित सम्पर्क एकाग्रता द्वारा छाप स्थानीयकरण क्षेत्र आइसोटप। हामी स्वस्थ छाला को क्षेत्रमा यो आंकडा तुलना यदि melanoma लागि "malignancy मापदण्ड को" स्तर, ट्यूमर भन्दा तेज को तीन गुना अधिक हुन मानिन्छ।
छाला melanoma विकल्प यस गैर-इनवेसिव निदान तपाईं आफ्नो विकास को एक प्रारम्भिक चरण मा समस्या पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। यो बाहिर छ इन्फ्रारेड रे fluxes कम एकाग्रता संग Confocal माइक्रोस्कोपी उपकरण प्रयोग गरेर। त्यसैले यो मानव शरीर गर्न हानि गर्न सक्दैन प्रयोग विकिरण खुराक, धेरै सानो छ। माइक्रोस्कोप उपकला को बाहिरी र भित्री तहहरू पडताल र पनि भर्चुअल बायोप्सी को एक सुधार संस्करण छलफल।
एमआरआई र सीटी
कुनै पनि क्यान्सर रोग विरुद्ध लडाई मा एक महत्वपूर्ण चरण metastases को प्रारम्भिक पत्ता लगाउने छ। यो कुरा यो शरीर घाउ भर फैलाउन अक्सर पुनरावृत्ति को likelihood बढ्छ र तीब्र रिकभरी लागि शून्य पूर्वानुमान गर्न कम छ भन्ने छ। यो अन्त गर्न, आज प्रयोग एमआरआई र सीटी।
चुम्बकीय अनुनाद बलियो चुम्बक र रेडियोधर्मी लहर प्रवाह को प्रयोगमा निर्भर। कारण यो यो दुवै अनुदैर्ध्य र transverse स्थिति मा एक तस्वीर प्राप्त गर्न सम्भव छ। गणना टोमोग्राफी पनि metastases को उपस्थिति प्रकट गर्छ। तर, उनको सहायता गर्न सामान्यतया घाउ को dissemination को तथ्यलाई अझै शरीर द्वारा पुष्टि छैन कि धारणा स्टेज गर्न resorted छ।
प्रारम्भिक चरण melanoma मा नेत्रहीन पत्ता लगाउन गाह्रो छ। बायोप्सी तपाईं ट्यूमर को तत्व अन्वेषण गर्न र आफ्नो malignancy को डिग्री निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। प्रक्रिया समयमा, डाक्टर ट्यूमर कक्षहरूको बार बनाउँछ र त्यसपछि एक माइक्रोस्कोप अन्तर्गत तिनीहरूलाई जाँच्ने। कहिलेकाहीं तपाईं पूर्ण छाला को शंकास्पद क्षेत्र हटाउन आवश्यक छ।
malignancy, मात्र होइन melanoma, तर पनि आसन्न ऊतक निष्कासन विषय पुष्टि गरिएको छ भने। जब मोटाइ 1 मिमी नाघ्यो, ध्यान दिएर वृहत नोड dissection लगे। यस्तो संरचना metastasize गर्छन। यो रोग प्रक्रिया गार्ड इकाइहरूमा सुरु हुन्छ। तिनीहरूले पनि माइक्रोस्कोप अन्तर्गत परीक्षा गर्न subjected छन्। क्यान्सर कक्षहरू यी भेट्टाउनेछन् मा एक विशेषज्ञ छैनन् भने, निदान लसीका प्रणाली अब पूरा भयो। अन्यथा, थप उपचार तोकिएको छन् (जस्तै, केमोथेरापी)।
रोग को स्वचालित पत्ता लगाउने
आत्म-निदान melanoma को विधि रोग पहिचान गर्न एउटा विश्वसनीय तरिका रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, खातामा लिन छैन यो पनि आवश्यक छैन। स्वास्थ्य स्थिति निरन्तर अनुगमन समस्या को प्रारम्भिक पत्ता लगाउने को likelihood बढ्छ।
क्यान्सर द्वारा निम्न लक्षण प्रक्रिया पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ:
शरीरमा नयाँ उमेर स्थलहरू वा Moles को उपस्थिति।
को nevus को रंग परिवर्तन, खुजली को घटना।
को रोगन को Discoloration - सेलुलर उत्परिवर्तन को एक विशेषता साइन।
Moles सीमाना परिवर्तन। तिनीहरूले तीव्रता गुमाए र अस्पष्ट र असमान बन्न सक्छ।
melanoma को प्रारम्भिक निदान सफल उपचार गर्न प्रमुख छ। तसर्थ, एक वा माथि दिइएका लक्षण बढी को उपस्थिति तुरुन्त त्वकरोग मदत खोज्नुपर्छ। रोग को एक परिवार इतिहास निदान गरिएको छ भने, यो छाला को अवस्था विशेष ध्यान संग आवश्यक छ।
विरामीहरु को दृश्य
melanoma को निदान को वास्तविक विरामीहरु के? यो प्रक्रिया को समीक्षा, त्यहाँ विभिन्न छन्। यस लेखमा मात्र रोग पत्ता लगाउन सबै भन्दा साधारण तरिका सूची। सर्वेक्षण को एक विशेष भेद को विकल्प सधैं एक डाक्टर छ।
सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू गैर-इनवेसिव प्रविधी संग सम्बन्धित छन्। यस मामला मा, विरामीहरु बेचैनी अनुभव छैन, तर प्रक्रियाहरु आफूलाई बिल्कुल पीडारहित छन्। तथापि, तिनीहरूले मात्र रोग विकास प्रारम्भिक चरण मा सूचनात्मक छन्।
नकारात्मक राय को बायोप्सी पछि उत्पन्न गर्छन। साँच्चै, यो सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत गरिन्छ कि एक अप्रिय प्रक्रिया हो। अर्कोतर्फ, यो मजबूती प्रक्रिया को malignancy को डिग्री निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सिफारिस गरिएका उपचार
र melanoma को निदान र उपचार उपेक्षित बाँकी हुँदैन। neoplasms पुष्टि तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुपर्छ पछि। उपचार रणनीति पनि रोग प्रक्रियाको चरण मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, सञ्चालन एक प्रारम्भिक चरण मा बाहिर छ। सर्जरी समयमा, डाक्टर melanoma, ऊतक र क्युटेनियस बोसो को 1-3 सेन्टीमिटरको दूरी मा आसन्न हटाउँदछ। यो रोग मा Cryodestruction विधि लागू गरिएको छैन।
metastases melanoma को निदान लागि क्लिनिक उपचार पछि पत्ता लाग्यो भने, उपचार irradiation र केमोथेरापी को स्वागत ( "tamoxifen", "Carmustine") पूरा गर्न छ। यो एक बरु विषाक्त एजेन्ट छ, तर प्रयोगको बिना गर्न सक्नुहुन्न। समानान्तर, अनिवार्य आयोजित immunotherapy मा।
रोग कसरी रोक्न?
कुनै पनि क्यान्सर को रोकथाम समसामयिक पत्ता छ। melanoma को निदान को अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 23 मई मा सालाना आयोजित छ। सबैभन्दा शहर मा हाम्रो देश को क्षेत्र मा धेरै ध्यान। उदाहरणका लागि, यो दिनमा, तपाईं nevi र Moles को एक मुक्त सर्वेक्षण शरीरमा, malignancy को डिग्री सिक्न लाग्न सक्छ। साथै, धेरै विशेष चिकित्सा केन्द्र मा दर्शक देखि रोग र उत्तर प्रश्नहरू कुरा गर्ने डाक्टर र साँघुरो विशेषज्ञहरु, साथ सभाहरू सञ्चालन गरे।
melanoma विकास यति सजिलो छैन स्वतन्त्र रोक्न। डाक्टर यूवी रेज को प्रवेश रोक्छ जो छाला, को लागि सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्न गर्मी मा आग्रह। Sunbathing देखि 12 16 घण्टा देखि अवधिमा त्यागेर गर्नुपर्छ। यो आफूलाई थप ध्यान आवश्यक छ। यो छाला मा नयाँ गठन पहिचान र विद्यमान Moles स्थिति अनुगमन गर्न कठिन आवधिक निरीक्षण शरीर हो।
पक्कै मा भने, त्वचा विशेषज्ञ वा ऑन्कोलॉजिस्ट भ्रमण गर्न राम्रो। कुनै एक मुक्त स्क्रिनिङ हुन सक्छ जब melanoma को निदान को दिन - पनि बिर्सन छैन मई 23 मा। परिणाम अनुसार, र मात्र आवश्यक विशेष व्यवसायीक सधैं थप परीक्षा को लागि पठाउनुहोस्।
नवीनतम क्यान्सर निदान विधि। पोजीट्रान उत्सर्जन tomography। पीईटी स्क्यान
कि क्यान्सर जन्मजात छ? क्यान्सर कस्तो छ?
स्वादिष्ट खाने: छिटो र सजिलै। खाने को लागि द्रुत व्यञ्जनहरु
को Bolsheviks शक्तिमा आउँदै। को Bolsheviks लागि कारण शक्ति आए
उत्पादन टेबल। उपकरण तटस्थ प्रमुख निर्माताहरु
धर्मशाला के हो? यसको उद्देश्य के हो?
स्वचालित ट्रान्समिसन - कसरी प्रयोग गर्ने? मोड स्विच, र स्वचालित नियन्त्रण
प्याज खाल मा Podcherevok - स्वादिष्ट, appetizing, पोसिलो
अखंड प्लेट अन्तर्गत अखंड बेल्ट: उपकरण, सिफारिसहरू र प्रविधि
एफसी "Fiorentina": टोलीमा
कति गिनी सुँगुरहरु घरमा बस्न र कसरी आफ्नो जीवन लम्ब्याउनु गर्न?